बर्लिन मा5होस्टल | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | आवास, बर्लिन
जर्मन राजधानी एउटा सहर हो जुन १ as औं शताब्दीमा टाढाको स्थापना भएदेखि यस खरानीबाट धेरै चोटि पुनर्जन्म भएको छ। यो सहरहरू मध्ये एक हो जुन कुनै पनि यात्रीले याद गर्न चाहँदैन किनकि यो पक्कै पनि २० औं शताब्दीको इतिहासको नायक हो। 40० बर्ष भन्दा माथिका कुन व्यक्तिले टेलिभिजनमा बर्लिन पर्खालको पतन देख्दैन?
ब्याकप्याकर होस्टलहरू सँधै राम्रो विकल्प हुन्छन् जब यो कम वा सस्तो ठाउँमा सुत्ने कुरामा आउँदछ, यद्यपि यो केवल मूल्यको बारेमा होइन: होस्टलहरू सामाजिकताको लागि उत्तम स्थानहरू हुन्, विश्वभरका मानिसहरूलाई भेट्न, नयाँ साथीहरू र जोडीहरू बनाउन। त्यसो भए हेरौं बर्लिनमा hos होस्टेलहरू।
1 सर्कस छात्रावास
2 छात्रावास ईस्टसेभन बर्लिन
3 छात्रावास Wombat शहर
4 Gran होस्टल बर्लिन
5 Baxpax छात्रावास
यो हो बर्लिनको बीचमा रेष्टुरेन्टहरू, बारहरू, संग्रहालयहरूले घेरेको छ। धेरै प्रदान गर्दछ अपार्टमेन्टहरू कोमो सुत्ने कोठा। यस अवस्थामा त्यहाँ तीन बेड, चार र पाँच बेड र आठ देखि दस ओछ्यानको साथ छात्रावासहरू छन्।
तीन-ओछ्यानको डोर्ममा जुम्ल्याहा बेड हुन्छ एकल र ती महानहरू हुन् जब तपाईं एक्लै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र व्यक्तिलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। तिनीहरूसँग नि: शुल्क वाइफाइ, लकरहरू, साझा बाथरूम, व्यक्तिगत पढ्ने बत्ती, कुर्सीहरूको साथ टेबल र एक शुल्क छ प्रति रात २eयूरो बाट। चार वा पाँच ओछ्यानको साथ छात्रावास २ 23 यूरो देखि लागत र मूलत: समान छ जबकि ठूलो छात्रावास लागत १०१.२० युरो बाट.
त्यहाँ केहि निजी कुरा चाहान्छन् अपार्टमेन्टहरू: चार मान्छे, डबल डिलक्स बालकनी संग, निजी डबल वा जुम्ल्या कोठा, एकल निजी कोठा, साझा बाथरूम संग एकल कोठा र साझा बाथरूम संग डबल कोठा पनि। उदाहरण को लागी, निजी बाथरूम लागत संग एकल कोठा प्रति रात २eयूरो बाट। र यो होस्टलले अरू के सुविधाहरू प्रदान गर्दछ?
खैर बिहानको खाजा नि: शुल्क छ दिउँसो १ बजे सम्म, नि: शुल्क वाइफाइ पनि छ, एउटा रिसेप्शन जुन २ hours घण्टा काम गर्दछ, पछि चेक आउट (दिउँसो १२ बजे), सामान भण्डारण, आरामदायी ओछ्यान, साइकल भाँडा, इलेक्ट्रोनिक कार्डहरू, बार र कफी २ 12 घण्टा, होस्टल भित्र एउटा सानो तर ठूलो ब्रीभरी, सामाजिक घटनाहरू, टुरहरू ... होस्टल रोसेन्थलर स्क्वायरमा छ, मिट्टी जिल्लामा वाइनबर्गवेगमा।
छात्रावास ईस्टसेभन बर्लिन
यो छात्रावास अवस्थित छ Prenzlauer Berg जिल्ला मा, क्याफे र बारहरूद्वारा घेरिएको र जर्मन राजधानीको मुख्य पर्यटक आकर्षणहरूको पैदल दूरी भित्र। भवनमा चार फ्लोर र प्रस्तावहरू छन् निजी कोठा, एकल, डबल, जुम्ला र मिश्रित छात्रावास।
मिश्रित छात्रावाससँग चार र आठ पलंग छन् र सबै कुरा छ केन्द्रीय ताप र गर्मी मा प्रशंसक (बर्लिन जमेको छ तर गर्मीमा यो तातो शहर होइन)। गद्दा राम्रो गुणको हुन्छ, त्यहाँ व्यक्तिगत लाइटहरू, तपाईंको सामानहरू भण्डार गर्न कोठाहरू र सबै फर्श बाथरूममा वर्षा सहितका बाथरूमहरू हुन् जुन दिनको २ hours घण्टा काम गर्दछ। एकातिर शौचालयहरू छन् भने अर्कोतिर वर्षा। यो अनुमान गरिएको छ कि सात व्यक्तिले बाथरूम बाँडफाँड गर्छन्।
हामीले त्यो जान्नुपर्दछ कुनै लिफ्ट छैन तर यो एक छ सुन्दर र ठूलो बगैचा चिसो वर्षा संग गर्मी मा प्रयोग गर्न को लागी, तालिका, ग्रिल र ह्यामोक्स आराम र सामाजिककरण को लागी। त्यसका लागि स्काईपको साथ कम्प्युटरहरू, संगीत, नक्सा, खेल र पुस्तकहरूको साथमा साझा कोठा पनि हुन्छ। सेवा वाइफाइ निर्माण कार्य भर र मुक्त छ। भान्छा प्रशस्त र राम्रोसँग सुसज्जित छ।
यो छात्रावास १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरकालाई स्वीकार गर्दैन र अनलाईनले आठ व्यक्तिको आरक्षण स्वीकार गर्दछ। यो एक सफा ठाउँ हो र बिहानको खाजामा चिया, कफी, अन्न र फलहरू तपाईले चाहानु भएको जति पटक प्रदान गर्दछ। १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई स्वीकार नगर्ने नीतिसहित, सत्य यो हो कि यसमाaछ शान्त वातावरण शहर मा धेरै होस्टल भन्दा।
छात्रावास Wombat शहर
यो होस्टल बुडापेस्ट, म्युनिक, भियना र लन्डनमा होस्टलहरूको एउटा श्रृंखलाको एक हिस्सा हो। प्रस्तावहरू नि: शुल्क वाइफाइ, सुटकेसहरू राख्नको लागि कुञ्जीको साथ लाकरहरू, सामान भण्डारण, अनाज-आधारित ब्रेकफास्ट, रोटी, दही, चिसो कटौती, एक सुसज्जित र विशाल भान्साकोठा, २ 24-घण्टा स्वागत, लुन्ड्री, एक टेरेस र सबै पाहुनाहरूलाई भेट्न एक रमाईलो पट्टी। टेरेस एउटा उत्तम स्थान हो जब घाम अस्ताउँछ र राम्रो दृश्यहरू हुन्छन्।
बर्लिनमा शाखा प्रस्ताव गर्दछ निजी कोठा र मिश्रित छात्रावास। फर्निचर न्यूनतम छ तर अल्पविराम सहज छन्। सफाई प्रत्येक दिन गरिन्छ र गर्मीमा प्रशंसकहरू छन् जबकि त्यहाँ वातानुकूलन छैन। बेडरुमहरू मिसिएका छन् भने पनि एक छ महिला बेडरूम छ व्यक्तिको लागि। डबल कोठा लागत १०१.२० युरो बाट कम मौसममा र from 76 बाट उच्च मौसममा। ब्रेकफास्टको लागतeयूरो छ र वाइफाइ नि: शुल्क छ।
यो छात्रावास रोजा लक्जमबर्ग स्क्वायरमा छ ट्राम, बस र ट्रेन संग धेरै नजिक।
Gran होस्टल बर्लिन
शान्त स्थान खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईले यो छात्रावास छनौट गर्न सक्नुहुन्छ यो क्रेजुबर्गमा लल्यान्डहोभर नहरको किनारमा अवस्थित छ। यो १ th औं शताब्दीको पुरानो भवनमा काम गर्दछ, र तिनीहरूको कोठा सामान्य भन्दा अलि बढी प्रशस्त छन् छात्रावासको लागि।
त्यहाँ छन् निजी कोठा र छात्रावास र यसमा कुनै पन्जा बेड छैन, तिनीहरू सबै एकल खाट हुन्। निजी कोठामा साझा बाथरूम छ, भवनको शान्त ठाउँमा छन् र खनिज पानी र इन्टरनेट समावेश गर्दछ। एक शुल्क छ प्रति रात २eयूरो बाट। त्यहाँ ineयूरोमा निजी बाथरूम बिना जुम्ल्याहा कोठा र bathroomeयूरोमा बाथरूमको साथ जोडाहरू छन्।
त्यहाँ दुई किसिमका बेडरूम हुन्छन्: ती साझा बाथरूमको साथ चार देखि सात ओछ्यान र एक एन-सुइट बाथरूमको साथ आठ बेडसहित। दुबै लागत प्रति रात 9, 90 यूरो बाट.
त्यहाँ धुलाई कोठा छ, एक भान्साकोठाको भान्साकोठा र एक ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेड, कफि, अरबी र भूमध्य खानासँग मिसाइन्छ र राम्रो मूल्यमा धेरै:eयूरो र तपाईले एक दिन पहिले नै बुक गर्नु पर्छ। तपाईं पर्यटन टुरहरू बुक गर्न सक्नुहुनेछ, शहरको ईतिहाससँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा वा यसको बारहरू मार्फत र तपाईं पनि बाइक भाडामा लिन सक्नुहुनेछ।
स्पष्ट रूपमा भित्र एउटा साझा कोठा छ, लाइब्रेरीको रूपमा चिनिन्छ, पुस्तकहरूको साथ साथै एक मिनी बार पनि हुन्छ जसले सबै काम गर्दछ र जहाँ सामान्यतया लाइभ म्युजिकल कार्यक्रमहरू हुन्छन्।
यो हो सरल आज हामीसँग रहेका छात्रावासहरूको। अवस्थित छ मिट्टे छिमेकीमायो एक उत्तम हो जब यो तपाईंको काँधमा ब्याकप्याकको साथ यात्राको रूपमा आउँदछ किनकि यो एस-बहन फ्रेडरिकस्ट्रासे स्टेशनको छेउमा छ।
यसमा टेरेस, अटिक र पौंडी पोखरी छ। प्रस्तावहरू नाइटक्लबहरूमा टिकटमा छुट तपाईका पाहुनाहरुलाई नि: शुल्क वाइफाइ र आफ्नै टर्मिनलहरू, पहुँच कार्ड / कुञ्जी, लगेज स्टोर, फायरप्लेस र बारको साथ आरामदायी लाउन्ज, धुलाई सेवा र साइकल भाडामा। त्यहाँ छन् महिला बेडरूम चार, पाँच र आठ ओछ्यानको साथ, अरू १ to देखि २ bed ओछ्यानका साथ धेरै ठूलो, र पनि निजी कोठा दुई, तीन र चार बेडको साथ एकल, डबल, ट्रिपल र स्टुडियो प्रकार।
स्वागतले २ 24 घण्टा काम गर्दछ, कुनै कर्फ्यू छैन। तिनीहरूको मूल्य जनवरी देखि जुलाई मा वृद्धि र अगस्ट र दिसम्बर बीच कम छ। सबैभन्दा कम दरहरू आइतवारहरू हुन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » बर्लिन » बर्लिनमा hos होस्टेलहरू